ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်: July 2007
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Sunday, July 29, 20076comments:
ကိုဖြိုးက `အထက်တန်းကျတဲ့ ဘလော့ဂါ ´ ဆိုတဲ့ခေါင်စဉ်နဲ့ ကဗျာရှည်ကြီးကို ဘလော့ဂါတွေအားလုံး ပေါင်းရေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ ပါဝင်ဆင်နွှဲလိုက်ပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်နဲ့ နဲနဲလွဲနေရင်တော့ မင်းပြင်ချင်တာပြင်လိုက်တော့ ကိုဖြိုးရေ …။
ဘောင်တွေနဲ့ ကျွမ်းဝင်မှုမရှိခဲ့ဘူး …
စိတ်တွေကို ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုး ပြောင်းနေရတာမုန်းတယ်
ငါ့ရဲ့ ကူသူမဲ့ အလဲအကွဲတွေထဲမှာ
စကားလုံးတွေက သွေးတွေလိုရဲနေနိုင်တယ် …
ငါ့ကဗျာတွေ မလှမပအသက်ဝင်နေနိုင်တယ် …
နှလုံးသားမှာ အတ္တဆူးတွေ ဆူးနေကြတဲ့
ငါ့စာတွေထဲမှာ ပါဝင်နေနိုင်တယ် …
စည်းဘောင်တွေနဲ့ မတင်းကျပ်တဲ့ နယ်မြေတစ်ခု
ငါ့အတွက် အသေအချာကိုလိုအပ်လာတယ် …
အဲဒါ … ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့ မြို့တော် ဖြစ်တယ်။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Thursday, July 26, 2007 1 comment:
မြန်မာဘလော့ဂါများတွင် အချို့သောအမျိုးသမီးဘလော့ဂါများသည် ပါဝင်ကူညီလိုသော်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အဆက်အသွယ်ပြတ်နေကြသဖြင့် အမျိုးသမီးဘလော့ဂါများအနေဖြင့် မမယ်လိုဒီမောင် အား ဆက်သွယ်၍ ပါဝင်ကူညီနိုင်ကြပါသည်။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Thursday, July 26, 2007 No comments:
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Wednesday, July 25, 20079comments:
လာမယ့် ကြာသပတေးနေ့ (၂၆.၀၇.၂၀၀၇) ညနေ ၅နာရီ မှာ ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ ဘလော့ဂါတွေအားလုံး လာမယ့်ဘလော့ဂ်ဒေး (ရက် မသေချာသေးပါ) မှာကျင်းပဖို့ ရှိတဲ့ Seminar
ကိစ္စအတွက် အသေးစိတ်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြရန် အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုကျင်းပဖို့ရှိပါတယ်။ နေရာကတော့ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း ၊ အာလာဒင်ရှေ့မှာရှိတဲ့ Coffee King မှာဖြစ်ပါတယ်။ အစည်းအဝေးဆိုတဲ့ သဘောမျိုးထက် ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ဂါတွေစုစည်းစီစဉ်ကြမယ့် Seminar ကြီးကို အောင်အောင်မြင်မြင် နဲ့ ကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက် ဘလော့ဂါတွေအားလုံး တိုင်တိုင်ပင်ပင်နဲ့ တာဝန်တွေခွဲဝေ ဆောင်ရွက်ကြဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေထဲမှာ ပထမဆုံးအနေနဲ့က Seminar ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်ပြီး ၊ ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ Seminar လုပ်နေစဉ်အတွင်းဆောင်ရွက်ရမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါ ၀င်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအတွက် ရန်ကုန်မှာရှိကြတဲ့ ဘလော့ဂါတွေအနေနဲ့ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ပါဝင်ကူညီအားဖြည့်နိုင်ဖို့ အတွက် အားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစည်းအဝေးလေးမှာ ဖြစ်နိုင်ရင် တစ်ခါတည်း အစုအဖွဲ့လေးတွေဖွဲ့ပြီး တာဝန်တွေတစ်ခါတည်းခွဲဝေပေးလိုက်မှဖြစ်တဲ့အတွက် အစည်းအဝေးကို တတ်နိုင်သမျှကြိုးစားပြီး တက်ရောက်ပေးကြဖို့အားလုံးကို မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Tuesday, July 24, 2007 1 comment:
သံလွင်ကိုအိပ်မက်ရင် ငါတို့ရဲ့တေးသွားကိုကြားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း ... သံလွင်ကိုအိပ်မက်ရင်း လူငယ်ထုကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ တေးသွားတွေကို အမြင်အာရုံနဲ့ နားဆင်နိုင်ပါပြီခင်ဗျာ ...။
ဖတ်ရှုရန် စောင့်မျှော်နေကြသော သံလွင်အိပ်မက်ရဲ့ ပရိသတ်များအတွက်
သံလွင်အိပ်မက်အမှတ် (၁၁) ထွက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးလိုက်ပါတယ်။ ပါဝင်နေကျ ကဏ္ဍတွေဖြစ်တဲ့ စကားဝိုင်း၊ ၀တ္ထုတို၊ ဆောင်းပါး၊ အက်ဆေး၊ကဗျာ၊ အင်တာဗျူး၊ ဓာတ်ပုံ၊ သီချင်း၊ ဗေဒင် စသဖြင့် ဝေေ၀ဆာဆာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ သတင်းကဏ္ဍနှင့် သံလွင်စာအုပ်စင်ကို မကြာမီ အချိန်ကာလအတွင်း ထပ်မံပြီး တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ အားပေးကြသူများ၊ ကူညီကြသူများ အားလုံးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း... ။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Monday, July 23, 2007 No comments:
ကျွန်တော်တို့ တာဝန်မကျေသေးဘူး ...
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Wednesday, July 18, 2007 No comments:
ကောင်းကင်ပေါ် ကြွေလွင့်သွားတယ် …။
အိပ်မက်တွေ ကွပ်မျက်ခံခဲ့ရတယ် …။
၁၉၄၇ ဂျူလိုင်လ ၁၉ရက်
၁၉၆၂ ဂျူလိုင်လ ၇ရက်
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Wednesday, July 18, 2007 1 comment:
နောက်ဆုံးမဟုတ်တဲ့ အဆုံး ...
လှုပ်ရှားနေတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေ ငြိမ်သက်သွားကြတယ် …
ဖြေရှင်းခွင့်မရှိပဲ ရှေ့ဆက်တိုးရတယ် …
အဲဒီ့ အဘိဓမ္မာတစ်ခု ဖွင့်ပြတယ် …
သေခြင်းတရားဆိုတာကို … သတိရကြရဲ့ …။ ။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Monday, July 16, 20072comments:
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Saturday, July 14, 20073comments:
အဲဒီ့ ကြယ်၀၀ကြီးနဲ့ ကြယ်ပိန်ပိန်လေးနဲ့မှာ တူညီတဲ့အချက်တစ်ခုရှိတယ်တဲ့။ အဲဒါကတော့ သူတို့ရဲ့ အချွန်အတက် ငါးခုရဲ့ ထောင့်တွေ (a,b,c,d,e) တို့ရဲ့ပေါင်းလဒ်တွေက တူညီတဲ့ဒီဂရီတစ်ခုရှိကြတယ်တဲ့ဗျ။ ဥပမာဗျာ … ကြယ်၀၀ကြီးရဲ့ (a,b,c,d,e) တွေရဲ့ပေါင်းလဒ်က 280ဒီဂရီဆိုရင် ၊ ကြယ်ပိန်ပိန်လေးရဲ့ (a,b,c,d,e) တွေပေါင်းလဒ်ကလဲ 280 ဒီဂရီပဲတဲ့ (ဥပမာပြောတာနော်)။ ဘယ်လောက်များဖြစ်မလဲ … ဘယ်လိုများသက်သေပြကြရင်ကောင်းမလဲ စဉ်းစားတွက်ချက်ကြည့်ကြရအောင်လေ . . .။ သင်္ချာကို ဂန်ဒူးနဲ့ အောင်ထားတဲ့သူတွေ မဖြေကြေး … ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ လွယ်လွန်းလို့ . . .။း-)
ကျွန်တော့်စာတွေက လေးတယ်ဆိုလို့ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဥာဏ်စမ်းလေးတွေတင်နေတာ ဦးနှောက်စားတယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကို စိတ်မဆိုးကြဖို့တော့ ကြိုပြီးတောင်းပန်ပါရစေဗျာ။
အဖြေသိချင်ရင် ကျွန်မန့်မှာ ၀င်ကြည့်ပါဗျို့ ...
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Friday, July 13, 20075comments:
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ဘုရင်ကြီးတစ်ပါး ရှိပါတယ်။ အဲဒီဘုရင်ကြီးမှာ အင်မတန်မှ အကျင့်မကောင်းတဲ့ ညီတော်တစ်ပါးလည်း ရှိတယ်။ ညီတော်ရဲ့ အဆိုးဝါးဆုံး အကျင့်ကတော့ သူတပါးပစ္စည်းတွေကို ခိုးတတ် ၀ှက်တတ်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နန်းတော်ထဲမှာ ပစ္စည်းပျောက်မှုတွေ ခဏခဏ ဖြစ်ပေမယ့် ဘုရင်ကြီးရဲ့ လျစ်လျူရှုမှုကြောင့် ညီဖြစ်သူဟာ ဒီလိုပဲ အပြစ်ဒဏ်ကနေ တနည်းနည်းနဲ့ လွတ်နေတာပါပဲ။ တစ်နေ့မှာတော့… မိဖုရားခေါင်ကြီးရဲ့ အမြတ်တနိုး ဆင်မြန်းလေ့ရှိတဲ့ လည်ဆွဲရတနာဟာ ပျောက်ချင်းမလှ ပျောက်သွားပါတယ်။ ဘုရင်ကြီးလည်း မိဖုရားခေါင်ကြီးရဲ့ ပစ္စည်းဖြစ်တာကြောင့် အပူတပြင်း စုံစမ်းဖော်ထုတ်တဲ့အခါမှာ ထုံးစံအတိုင်း သူ့ရဲ့ညီတော်လက်ချက်ပဲ ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ ဘုရင့်ရဲ့ ဘဏ္ဍာတော်ကို ခိုးယူခြင်းအတွက် ခံစားရမယ့် အပြစ်တော်ကတော့ အလျှော့အပေါ့မရှိ သေဒဏ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရင်ကြီး အခက်တွေ့ပါပြီ…။ ညီတော်ကို အပြစ်က ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးချင်ပေမယ့် မင်းပရိသတ်တွေရဲ့ရှေ့မှာ အသားလွတ်ကြီး လွတ်စေ ဆိုပြီး လုပ်လိုက်ဖို့ဆိုတာက သိပ်မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါ…။ အဲဒါနဲ့ ဘုရင်ကြီးလည်း… ဥာဏ်ရှိရင်တော့ လွတ်ပေါ့ကွာ ဆိုပြီး… အခုလို စီစဉ်လိုက်ပါတယ်။ ခွေးတစ်ကောင်ကို ယူလာစေပြီး ညီတော်ကို ဒီလို ပြောလိုက်ပါတယ်။
``ဒီခွေးကို မင်းသတ်ပါ…။ မင်း အဲဒီခွေးကို သတ်သလိုမျိုး မင်းကိုလည်း အာဏာပါးကွက်သားတွေက ပြန်သတ်လိမ့်မယ်…။ ဒါမင်းအတွက် အပြစ်ဒဏ်ပဲ…´´
ဘုရင်ကြီးရဲ့ အဲဒီစကားကိုကြားတော့ ညီတော်ခမျာ မျက်စိမျက်နှာ ပျက်သွားပါတယ်။ ဒီခွေးကို ဓားနဲ့ထိုးသတ်ရင် သူ့ကိုလည်း ဓားနဲ့ ထိုးလိမ့်မယ်။ ဒီခွေးကို ရေနှစ်သတ်ရင် သူ့ကိုလည်း ရေထဲနှစ်ပြီး သတ်ကြမယ်…။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့နောင်တော်က အကြောင်းမရှိပဲနဲ့တော့ ဒီလို ထူးထူးဆန်းဆန်း မိန့်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ တွေးမိပြီး အပြင်းအထန် စဉ်းစားပါတော့တယ်။
ကဲ… ခင်ဗျားသာ… သူ့နေရာမှာဆို ခွေးကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ သတ်မလဲ…။
ဘုရင်ကြီးရဲ့ညီတော်ကတော့ ခွေးကိုအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့သတ်လိုက်နိုင်ပြီး သူကတော့ အပြစ်ကနေလွတ်သွားခဲ့ပါတယ်။
အဖြေသိချင်ရင် ကွန်မန့်မှာကြည့်ပါဗျို့ …။ မစဉ်းစားပဲ ၀င်မကြည့်ကြေး ...။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Tuesday, July 10, 2007 14 comments:
ကျွန်တော့် ၇တန်းကျောင်းသားဘ၀လောက်ကတည်း က စာတွေစရေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့ပထမဦးဆုံး မဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာပေါ်မှာ ဖော်ပြခံခဲ့ရတဲ့ဆောင်းပါးကတော့ EDUCATION ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာလုံးကို ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာပြီး ရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးလေးဖြစ်ပြီး ဖော်ပြခဲ့တဲ့မဂ္ဂဇင်းကတော့ စံပယ်ဖြူမဂ္ဂဇင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့ဆောင်းပါးလေးပါပြီးတဲ့နောက်မှာ ဆရာ၊ ကျောင်းသားနှင့်ဖြစ်ရပ်များဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးလေးကို ထပ်ပို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပို့ပြီးတော့လဲ ကျွန်တော့်သဘာဝအတိုင်း မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ပါပဲ။ ၂၀၀၄ခုနှစ်လောက်က ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ပြည်လမ်းက ပြည်ဥယာဉ်ကွန်ဒိုမီနီယံ စီမံကိန်းမှာ အလုပ်ဝင်နေတဲ့အချိန်မှာ အလုပ်ကိုဖုန်းဝင်လာပါတယ်။ စံပယ်ဖြူမဂ္ဂဇင်းက ကိုမင်းငြိမ်းချမ်းဆက်တာပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ဆောင်းပါးကို သုံးထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ နောက်ထပ်လဲစာတွေထပ်မံရေးသား ပေးပို့ဖို့ အကြောင်း ကျွန်တော့်ကိုပြောပါတယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကျွန်တော် ပျော်သွားပါတယ်။ အရင်ကဆို စာမူတွေပို့တယ်၊ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာပါလာခဲ့ရင်လဲ စာမူခသွားထုတ်လိုက်တယ် . . . ဒီလောက်ပါပဲ။ အခုလို မဂ္ဂဇင်းတာဝန်ရှိသူတွေက ကိုယ့်ကို အရေးတယူနဲ့ စာမူတွေထပ်ပို့ဖို့ ပြောလာတာ အဲဒါ ပထမဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ အဲဒီ့နောက်ပိုင်းမှာ … ကျွန်တော် ဆောင်းပါးလေးတွေပုံမှန်ရေးပြီး စံပယ်ဖြူမဂ္ဂဇင်းကို ပို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပါတဲ့အခါလဲပါ . . . ပြုတ်တဲ့အခါလဲ ပြုတ်ပေါ့ဗျာ။ ကိုမင်းကတော့ အဆင်ပြေရင်ပြေသလို ကျွန်တော့်ရဲ့စာမူတွေကို အသုံးပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ကျွန်တော် အလုပ်ကိစ္စတွေ၊ သံလွင်အိပ်မက်ကိစ္စတွေ၊ အခြားလူမှုရေးကိစ္စတွေ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေ၊ ဘလော့ဂ်ကိစ္စတွေ များလာတဲ့အတွက် စာတွေသိပ်မရေးဖြစ်တာတောင် စံပယ်ဖြူအတွက်တော့ ပုံမှန်ရေးပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ တခါ တခါ ကျွန်တော့်စာမူတွေနောက်ကျလို့ ဖုန်းဆက်ပြီးပြောပြောနေရတဲ့ ကိုမင်းကိုလဲ အရမ်းအားတုံ့အားနာဖြစ်မိပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နေဘုန်းလတ်ဆိုတဲ့ ကျွန်တော့်လို အညတရ စာတိုပေစရေးသူတစ်ယောက်ကို နေရာတစ်ခုပေးခဲ့တဲ့ စံပယ်ဖြူမဂ္ဂဇင်းရဲ့ ကျေးဇူးတရားဟာ ကျွန်တော့်အပေါ်မှာ အင်မတန်မှကိုကြီးမားပါတယ်။ ဒီနေရာကနေပဲ စံပယ်ဖြူမဂ္ဂဇင်း တည်ထောင်သူ ဒေါ်ခင်ဆွေဦး၊ အတိုင်ပင်ခံ ကိုမိုးကျော်အောင်၊ စီစဉ်သူ ကိုမင်းငြိမ်းချမ်းနဲ့ မဂ္ဂဇင်းအဖွဲ့သားအားလုံးကို ကျေးဇူးစကားဆိုချင်ပါတယ်။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Monday, July 09, 2007 No comments:
ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ဂ်စာအုပ်အတွက် ပဏာမရွေးချယ်ထားကြတဲ့ စာမူတွေရဲ့ ကြယ်အရေအတွက် ကိုရေတွက်အပြီး . . . ကျွန်တော်တို့ အရင်တစ်ခေါက်အစည်းအဝေးတုန်းက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့ ကဏ္ဍတွေ အတိုင်း ခွဲခြမ်းလိုက်တဲ့အခါ ဘလော့ဂ်ဆိုသည်မှာ . . . (၁၄) ပုဒ်၊ ကဗျာ (၅၅)ပုဒ်၊ ဟာသ (၁၅)ပုဒ်၊ လူမှုဝန်းကျင် (၂၃)ပုဒ် ၊ အတွေးအမြင် (၁၃)ပုဒ်၊ အထွေထွေဗဟုသုတ (၁၈)ပုဒ်၊ ရသ (၉)ပုဒ်၊ အက်ဆေး(၂၁)ပုဒ်၊ ၀တ္ထုတို (၁၃)ပုဒ်၊ နည်းပညာ (၇)ပုဒ်၊ ခရီးသွားဆောင်းပါး (၃)ပုဒ် ဆိုပြီးရလာပါတယ်။ အဲဒီ့လိုခွဲပြီးတဲ့ နောက်မှာ စာမူတွေရဲ့ရရှိတဲ့ ကြယ်အရေအတွက်ကို များရာကနေ နဲရာကိုစီချလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ့နောက် ပထမအဆင့်အနေနဲ့ ကြယ်အရေအတွက် ၄၀ အောက်ကျတဲ့ စာမူတွေကို စပြီးပယ်ပါတယ်။ ကြယ်အရေအတွက် ၄၀ အထက်စာမူတွေထဲကမှ စာရေးသူတစ်ဦးတည်းရဲ့ ပိုစ့်တွေထပ်နေရင် ကြယ်နဲတဲ့ပို့စ်ကိုပယ်ပါတယ်။ အခြားမဂ္ဂဇင်းတွေမှာပါပြီးသားပို့စ်တွေကို ထပ်ပယ်ပါတယ်။ လူမှုဝန်းကျင်ကဏ္ဍနဲ့ ကဗျာကဏ္ဍတွေမှာ အရေအတွက်များနေတာကြောင့် ကြယ် ၄၅ အောက်ရတဲ့စာမူတွေကို ပယ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ … နောက်ဆုံးအနေနဲ့ … ဘလော့ဂ်ဆိုသည်မှာ . . . (၇) ပုဒ်၊ ကဗျာ (၁၃)ပုဒ်၊ ဟာသ (၁၀)ပုဒ်၊ လူမှုဝန်းကျင် (၁၁)ပုဒ် ၊ အတွေးအမြင် (၅)ပုဒ်၊ အထွေထွေဗဟုသုတ (၈)ပုဒ်၊ ရသ (၆)ပုဒ်၊
အက်ဆေး (၈)ပုဒ်၊ ၀တ္ထုတို (၉)ပုဒ်၊ နည်းပညာ (၇)ပုဒ်၊ ခရီးသွားဆောင်းပါး (၂)ပုဒ် ဆိုပြီး
စုစုပေါင်း ၈၆ပုဒ် လက်ရွေးစင်အနေနဲ့ထွက်လာပါတယ်။ အဲဒီ့ ၈၆ပုဒ်ဟာ စာမျက်နှာဘယ်နှစ်မျက်နှာထွက်မလဲ ဆိုတာကို အတိအကျမပြောနိုင်ပေမယ့် ပျမ်းမျှခြင်း ပိုစ့်တစ်ခုကို နှစ်မျက်နှာခွဲနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင် ၂၁၅မျက်နှာ ပဲရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ စာမူတွေထပ်ထည့်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာကို တွေ့ရှိ ခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လိုစာမူမျိုးတွေထပ်ထည့်မလဲ ဆိုတဲ့အချက်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြရာမှာ ဘလော့ဂ်ဆိုသည်မှာ …၊ ဟာသ၊ အတွေးအမြင်၊ ရသ၊ နည်းပညာ၊ ခရီးသွားဆောင်းပါး စတဲ့ကဏ္ဍတွေ အတွက်ထပ်ထည့်သင့်တယ်လို့ ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အဆိုပါကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စာမူတွေကို အယ်ဒီတာများအနေနဲ့ စာအုပ်ဘလော့ဂ်မှာ ထပ်မံဆန္ဒပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့စာမျက်နှာအရေအတွက် နဲ့ စာမူတွေရဲ့ အရည်အသွေးအပေါ့အလေး ပေါ်မူတည်ပြီးသင့်တော်သလိုထပ်မံဖြည့်စွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးလက်ရွေးစင် စာမူ ၈၆ပုဒ်ရဲ့ စာရင်းကို အယ်ဒီတာများအဖြစ်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ ဘလော့ဂါညီအစ်ကို မောင်နှမတွေအနေနဲ့ စာအုပ်ဘလော့ဂ်မှာ သွားကြည့်လို့ရပါတယ်။ အဆိုပါ စာမူ ၈၆ပုဒ်ဟာ စီစစ်ရေးလွတ်ပါက ဘလော့ဂ်စာအုပ်မှာပါဝင်ဖို့အတွက် သေချာသလောက်ရှိတာမို့ အဲဒီ့ပို့စ်တွေကို ရေးသားကြတဲ့စာရေးသူတွေကို အောက်ပါအချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းအတည်ပြုဖို့ လိုအပ် လာပါတယ်။
၁) ကိုယ်တိုင်ရေးစာမူဖြစ်ကြောင်း (ဘာသာပြန်ထားပါကလည်း မူရင်းစာအမည်နှင့် စာရေးဆရာအမည်ကိုဖော်ပြရန်)
၂) မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသော အခြားမည့်သည့် မဂ္ဂဇင်း၊ စာအုပ်တွင်မှ ဖော်ပြဖူးခြင်းမရှိကြောင်း။
၃) မြန်မာဘလော့ဂါများစုစည်းထုတ်ဝေမည့် အနာဂတ်လှိုင်း၏ဆုံမှတ်များစာအုပ်အတွက် စာမူကို မိမိသဘောဆန္ဒအရ အသုံးပြုခွင့်ပြုကြောင်း။
၄) နည်းပညာဆိုင်ရာပို့စ်များဖြစ်ပါက မိမိရေးသားထားသော အကြောင်းအရာ အချက်အလက်များ၏ မှန်ကန်မှုကို တာဝန်ယူကြောင်း။
ဒါတွေကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာ စာအုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့တာတွေဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာဘလော့ဂါအစည်းအရုံးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ကြတာတွေကိုတော့ မောင်ပွတ်ရဲ့ ဘလော့ဂ် www.myanmaroa6.blogspot.com မှာ အသေးစိတ်ဖော်ပြထားတာကို သွားရောက်ကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Monday, July 09, 2007 1 comment:
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Friday, July 06, 20074comments:
ဗိုလ်ချုပ်ရေ ... ကျွန်တော်တို့ တာဝန်မကျေသေးဘူး ...